Ndị na-emepụta ogwe aka na ndị na-ebu ngwa ngwa - China ARM & BOOM Factory
Bonovo Extension Arm na-adaba maka ọtụtụ arụmọrụ dị iche iche ma na-enye gị ohere ịme ihe ndị ga-achọbu onye na-egwupụta ihe ogologo oge.
Ọ bụ ihe mgbakwunye kachasị maka ndị na-arụ ọrụ nwere ọrụ iru ogologo oge ha ga-arụ mana ha achọghị ịchụ ego maka ngwupụta ihe dị ogologo.
Bonovo Nkebi Abụọ Ogologo Ogologo na Ogwe aka bụ ụdị kachasị ewu ewu na ogwe aka. Site na ịgbatị ọganihu na ogwe aka ahụ, enwere ike iji ya rụọ ọrụ ogologo oge. , Ogwe aka dị ogologo * 1, bọket * 1, bọketị silinda * 1, H-Link & I-Link * 1 set, ọkpọkọ & hoses.
Bonovo Rock Arm na Boom nwere ike igwu ala nke a na-ejikarị eme ihe, nsị okporo ụzọ, iwu ụlọ, oyi ala kpụkọrọ akpụkọ na ụdị ọrụ ndị ọzọ. ọnọdụ ọrụ.
Bonovo Telescopic Arm na-akpọ gbọmgbọm ogwe aka. Akụkụ mbụ bụ ahụ edozi, ndị ọzọ na-emegharị ahụ. A na-etinye ozu niile na-agagharị n'ime ahụ edozi. A na-eji silinda strok mee ka ọ gbasaa ma ọ bụ weghachite ya, a na-ejikarị ya eme ihe na ndị na-egwupụta ihe maka olulu miri emi ma ọ bụ arụmọrụ dị elu.
Bonovo Atọ Nkebi Ogologo Iru Ọganihu & Ogwe aka na-akpọ demolition ọganihu & ogwe aka. N'ebe osisi atọ nwere akụkụ, ọnụọgụ ọrụ na-arụ ọrụ ka ukwuu, nke na-eme ka ọ dịkwuo mma maka ọnọdụ ọrụ ịkwatu. A atọ ngalaba ogologo iru ọganihu & ogwe aka na-agụnye: ogologo ọganihu * 1, ogologo ogwe aka, 1, n'etiti osisi, 1, ịwụ cylinder * 1, ogwe aka cylinder * 1, H-njikọ & l-njikọ *! set, ọkpọkọ & hoses.